ကွန်ပျူတာကိုမိမိကြိုက်တဲ့အချိန်မှာ Auto Shutdown လုပ်ခိုင်း၇အောင် | နေမင်း ( နည်းပညာ )
ကွန်ပျူတာကိုမိမိကြိုက်တဲ့အချိန်မှာ Auto Shutdown လုပ်ခိုင်း၇အောင်
March 20, 2011 — naymin99 ဒီနည်းလမ်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့အိပ်ခါနီးမှာသီချင်းလေးတွေနားထောင်ပြီးမှအိပ်ချင်သူတွေအတွက်တော့အ၇မ်းကိုအသုံးတည့်ပါတယ်။ကွန်ပျူတာကိုနောက်ထပ်တစ်နာ၇ီကြာ၇င် Auto Shutdown လုပ်ခိုင်းမှာလားမိမိစိတ်ကြိုက်အချိန်အတိုင်းအတာကိုလဲသတ်မှတ်လို့၇ပါတယ်။နည်းလမ်းလေးကလဲအ၇မ်းကိုလွယ်ပါတယ်။အောက်ကနည်းလမ်းလေးတွေအတိုင်းလိုက်လုပ်ကြည့်လိုက်ပါနော်……..
1. Window + R ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ပြီး၇င် Run Box ထဲမှာ shutdown.exe -s -t 3600 ဆိုပြီး၇ိုက်ထည့် လိုက်ပါ။ 3600နေ၇ာမှာမိမိတို့စိတ်ကြိုက်အချိန်ကိုသတ်မှတ်ပေးလို့၇ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကွန်မန် လေးပေးပြီးနောက်ထပ် စက္ကန့် ( 3600 ) တစ်နာ၇ီကြာ၇င်စက်ကအလိုလို Shut down ကျသွားပါလိမ့် မယ်။
2. တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့အချိန်မှာ Shut down မချချင်တော့လို့ပေးထားတဲ့ကွန်မန်းလေးကို ပြန်ပြီးဖျက်ချင်တယ်ဆို၇င်လဲ၇ပါတယ်။ Run Box ထဲမှာ shutdown.exe -a ဆိုပြီး ၇ိုက်ထည့်လိုက်ပါ။ဒါ ဆို၇င်ကျွန်တော်တို့စောစောကပေးထားတဲ့ကွန်မန်းလေးပြန်ပျက်သွားပါလိမ့်မယ်။ အခုနည်းလမ်းလေကိုကို ဧကရာဇ် ဆီမှပြန်လည်မျှဝေထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
« Color Code လေးတွေပါ။
Facebook ကို Themes ပုံစံလန်းလန်းလေးသုံးချင်သူများအတွက် »